January 6, 2021 - Online Hartha
“ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယလူငယ် ဗေဒင်ဆရာ နောက်ထပ် ‌ဟောကိန်းတစ်ခုထပ်ထုတ် ”
January 6, 2021 by Online Hartha
“ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ‌ဟောခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ လူငယ်ဗေဒင်ဆရာ နောက်ထပ် ‌ဟောကိန်းတစ်ခုထပ်ထုတ် ” အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယလူငယ် ဗေဒင်ဆရာ Abhigya Anand က နောက်ထပ် ‌ဟောကိန်းထပ်ထုတ်။ COVID-19 ထက်ပိုပြီးဆိုးဝါး ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းမည်ဟုဆို။ – လူတွေ ငတ်ပြတ်ကြလိမ့်မည်ဟုဆို :(> သူသည် လွန်ခဲ့သော ၇ လခန့်၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လကတည်းက ကမ္ဘာမှာ 2020 ပြည့်နှစ်အတွင်း ဇီဝပိုးလက်နက် တိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ် ပိုးမွှားနှင့် လူတွေကြား တိုက်ခိုက်ရတဲ့ စစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ် ကမ္ဘာ့ကပ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ် ( COVID-19 မဖြစ်ခင် လေးလကတည်းက ) အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းခံရသူလည်းဖြစ် အရင်က သူ့ဟောကိန်းကို ဘယ်သူမှ … Read more
ခေါငျးဖွီးလို့ ဆံပငျတှအေရမျးကြှတျလာရငျ စိတျမညဈရအောငျ အိမျတှငျးကုသနညျး
ခေါင်းဖြီးလိုက်လို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်မညစ်ရအောင် ခေါင်းဖြီးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်ညစ်ရသလို၊ ဆိုင်မှာခေါင်းသွားလျှော်ရင်လဲအစ်မဆံပင်တွေကျွတ်တယ်နော် ပြောရင် စိတ်ပိုညစ်ရပါတယ်။ အမှတ်မထင်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ဆေးနည်းလေးနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ ကိုယ့်လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ ဆေးဘက်ဝင်တာသိပေမဲ့ ကြက်သွန်နီကိုကြိတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်လိမ်းတဲ့အခါ ကြက်သွန်စိမ်းနံ့ပျောက်ဖိုိ့ တော်တော်ခေါင်းလျှော်ယူရတာ ကျွန်မအတွက် သိပ်အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ တော်တော်အဆင် ပြေပါတယ်….။ လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ဆန်ကိုပန်ကန်လုံးလေးနဲ့တစ်ခွက်ယူပါ။ ဆန်ကိုထမင်းချက်သလိုပဲ နှစ်ကြိမ်လောက်ဖွဖွလေးဆေးပါ. ဆေးထားတဲ့ဆန်ကို နှစ်နာရီလောက်စိမ်ထားလိုက်ပါ ရေနည်းနည်းနဲ့ပဲစိမ်ပါ. ကြက်သွန်နီကိုအခွံခွာပါ ကြက်သွန်နီကို ရှစ်စိပ်စိပ်လိုက်ပါ (ကျွန်မကတော့ဆန်ပန်းကန်လုံး တစ်ခွက်ဆို ကြက်သွန်နီနှစ်လုံး သုံးပါတယ်) ဆန်နဲ့ကြက်သွန်စိပ်ထားတာရောလိုက်ပါ ရေနည်းနည်းထပ်ထည့်ပေးပါ မီးဖိုပေါ်မှာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် မွှေပေးပါ ဆန်နည်းနည်းကျေတဲ့အထိထားပါ ..(ဆန်ပြုတ်အဆင့်မရောက်ပါ) အဲ့လောက်ဆို ..ရေစစ်ထဲကိုထည့်ပြီး အရည်ညစ်ယူပါ။ ရေကုန်သွားအောင်ညှစ်ပါ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းပြီးတစ်ပတ်လောက်ထားသုံးလို့ရပါပြီ … Read more
မွို့ရှာတို့၌ ကပျ ၊ ဥပဒျ ဆိုကျရောကျလိမျ့မညျကို ကွိုတငျ၍ သိနိုငျသညျ့ အတိတျ နိမိတျထူး(၂၇)ခကျြ
မြို့ရွာတို့၌ ကပ် ၊ ဥပဒ် ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည်ကို ကြိုတင်၍ သိနိုင်သော အတိတ် နိမိတ်ထူးများ ယခု ခေ တ် ဆေးသိပ္ပံ ပညာအရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ရောဂါပိုးလို့ ဘယ်လိုပင် သတ်မှတ် ကြပေမယ်လို့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်အရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ရောဂါပိုး ဆိုတဲ့ အရာတွေဟာ ရုပ်သာ ရှိ၍ နာမ် မရှိ။ စိတ် မရှိတဲ့အရာ ဝတ္ထုတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ” ပါဏ ” လို့ခေါ်တဲ့ အသက် မရှိတဲ့ ထူးခြားသော ရုပ် သက်သက်သာ ဖြစ်တယ်။ လောဘ ဒေါသ မောဟ ကြီးမား အားကောင်းလွန်းလှတဲ့ သတ္တဝါတို့၏ အကုသိုလ်ကံ ပျက်စီးဖို့ အကြောင်း ကံများ … Read more
ငါ့အမမြေား တကယျဖုတျဝငျနရေငျတယျဆိုရငျတောငျ အဲသညျဖုတျကောငျကို ကြေးဇူးတငျအုံးမှာပါ
“အသက် ၉၀ အမေ ” ဟင် …..အမေ …ဘာလုပ်မလို့လဲ …ည သန်းကောင်၁နာရီကျော်ကျော် လောက်တရေးနိး အပြင်ထွက်လာတဲ့ မလဲ့ ..အမေ့ကို ထမင်းဝိုင်းမှာ ကုန်းကွကွ မြင်လိုက်ရတယ်။ ” အမေ ဗိုက်ဆာလို့ ထမင်းစားမလို့ ….” ထမင်းအုပ်ဆောင်းဖွင့်လျက်သား တန်းလန်းနဲ့အမေကဖြေပါတယ်။ အော်…ဟုတ်လား…လဲ့ဝင်းပြင်ပေးမယ်အမေ။ညနေထဲက ဖယ်ထားတဲ့ ငါးဘတ်မွှေဟင်းငါးပိရည်ချိုပန်းကန် ခဝဲသီးဂျော်ဂျက်ရောင်ဟင်းရည်ပုဂံကိုအမေ့အရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်။ညနေက ဝယ်ထားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး နဲ့ဟင်းရည်ကို နောက်နားမှာခပ်ရှိုရှို ပို့ထားလိုက်တာ .. “ငါ မုန့်ဟင်းခါးပဲစားမယ် ငါ့ကိုမုန့်ဟင်းခါးပဲပေး …”မုန့်ဟင်းခါးက ဘယ်အချိန်ထဲကချက်ထားတာလဲမသိဘူး အမေရဲ့အမေဝမ်းနူး နေအုန်းမယ် ရာသီကလဲပူတယ်ဆိုတော့ .. မလဲ့စကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲ အမေ မုန့်ဟင်းခါး ဖတ်ထဲဟင်းရည် ထည့်ပီး စားနေပါပီ။” မကြီး အမေက ည ည ဗိုက်ဆာတယ်ဆိုပီး တရေးနိုးထထ ပီးစားတယ် … Read more
ကိုယျဝနျကွီးနဲ့မို့ မလုပျပါနဲ့ပွောတာကို တားမရ၍ မခံနိုငျတဲ့အဆုံး ရပျကှကျရုံး တိုငျကွားခဲ့ရတဲ့အဖွဈ
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူးနဲ့ကို တိုင်မှာ” “မိန်းမကလည်းကွာ… ငါက ချစ်လို့စတာကို လာပါ ပြန်ရအောင်” “မပြန်ဘူး မပြန်ဘူး… ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ” ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ သူ့မိန်းမ ပေါက်ကြီး ပေါက်ကြီးဆိုတာက တစ်နှစ်တစ်ယောက် မှန်မှန်မွေးနေကျမို့ ပေါက်ကြီးလို့ခေါ်တာ။ အမြဲတမ်း လင်မယားတကျက်ကျက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာတောင် ပေါက်ကြီးတို့လင်မယားက တစ်နှစ်တစ်သားတော့ပုံမှန်ပေါက်နေကျ အခုလည်း ကလေးတစ်ယောက်က လက်မှာ တွဲလောင်းဆွဲလို့ ဗိုက်ထဲမှာက တစ်ယောက်နဲ့…အဲဒါလည်း ခုထိ အဖြေထုတ်လို့ မရသေးတဲ့ ပုစ္ဆာ “ရာအိမ်မှူးရေ… ရာအိမ်မှူးတပည့်နဲ့ကျွန်မကို ကွာရှင်းပေးပါ” “ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲဟာ နင်တို့လင်မယားကလည်း အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်မယ်လို့များ … Read more
မှေးခနျးထဲမှာ သားဖှားမယျ့မိနျးကလေးကို မှုတျပေးရတဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျရဲ့ အဖွဈ
မွေးခန်းထဲမှာ သားဖွားမယ့်မိန်းကလေးကို မှုတ်ပေးရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်…… ကျနော်က Ortho ပေမယ့် ဆာဝန် ဘဝ တလျှောက် OG Ward ကို အလွမ်းဆုံး ။ OG တောင်မှ မွေးခန်း ကို အလွမ်းဆုံး ။ ဘယ်လောက် လှတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်စေ ဘယ်လောက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမဖြစ်စေ မွေးခန်းထဲ ရောက်ရင် အတူတူပဲ ။ လှလှ မလှလှ.. ရုပ်ဆိုးဆိုး မဆိုးဆိုး ချီးမထွက်ရင်… တော်ပြီ။ ကိုယ်ဒွေ အတွက်တော့ ချီးမထွက်တဲ့ မိန်းမ က ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျ။ ခလေး မထွက်ခင်.. ချီး အရင် ထွက်တတ်တာကိုး🤮🤮။ မိန်းမ အများစု (တချို့မပါ )တူညီတဲ့ အချက်က … Read more
ဘယျလို သစ်စာ၊ကတိတှမြေား တိုငျတညျမိခဲ့ကွပါလိမျ့နျော…
ဘယ်လို သစ္စာ ကတိတွေများတိုင်တည်ခဲ့ကြပါလိမ့်… ဘယ်ဘဝကရေစက်တွေများလည်းနော်… မိုးကောင်းကျေးရွာ နာရေးအိမ်မှာ မနေ့က အအေးခေါင်းဆင်တော့ ခုံလေးမှာ ရီဝေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကြည့်နေတဲ့အဘ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနောက်ကို ဒီမနက်အစောပဲ လိုက်သွားပြီတဲ့။ စိတ်လျှော့လိုက်တာများလား။ ဘယ်လို သစ္စာ ကတိတွေများတိုင်တည်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ ဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားသော အဘိုးနဲ့ အဖွား ကောင်းရာဘုံဘွရောက်ပါစေ အအေးခေါင်းနောက်တစ်လုံးဆင်ပေးရင်နဲ့ တွေးမိတဲ့အတွေးများပါ။ ဒေါ်တင်မြင့် ၇၃နှစ်၊ ဦးမြဝင်း ၇၅ နှစ်။ လှမျိုးဝင်း.မြန်မာစာ mt Unicode Version ဘယျလို သစ်စာ ကတိတှမြေားတိုငျတညျခဲ့ကွပါလိမျ့… ဘယျဘဝကရစေကျတှမြေားလညျးနျော… မိုးကောငျးကြေးရှာ နာရေးအိမျမှာ မနကေ့ အအေးခေါငျးဆငျတော့ ခုံလေးမှာ ရီဝတေဲ့မကျြလုံးအစုံနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့အဘ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဖွဈသူနောကျကို ဒီမနကျအစောပဲ လိုကျသှားပွီတဲ့။ စိတျလြှော့လိုကျတာမြားလား။ ဘယျလို သစ်စာ ကတိတှမြေားတိုငျတညျခဲ့ကွပါလိမျ့။ ဘဝတဈပါးသို့ကူးပွောငျးသှားသော အဘိုးနဲ့ အဖှား ကောငျးရာဘုံဘှရောကျပါစေ … Read more
မိမိကိုယ်တိုင်က သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ချင်ပေမယ့် ဘ၀ပေးအခြေနေအရ မော်တော်ပီကယ်လုပ်ခိုင်းသောအခါ…(ရုပ်သံ)
မိမိကိုယ်တိုင်က သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ချင်ပေမယ့် ဘ၀ပေးအခြေနေအရ မော်တော်ပီကယ်လုပ်ခိုင်းသောအခါ… ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားပါသည်… ဆိုင်ကယ်စီးလျှင် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းရန် နှိုးဆော်သတိပေးနေသော ယာဉ်ထိန်းရဲ မော်တော်ပီကယ် ဦးလေးကြီးရုပ်သံ အွန်လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီးနေပါတယ်… အားလုံးကလဲ သဘောကျစရာဖြစ်နေပါတယ် အပြောကလဲကောင်း တရားဟောစားလို့တောင်ရပါတယ် ကြားရသူတွေ စိတ်ထဲမှာလဲ သတိထားဆင်ခြင်စိတ်ဖြစ်အောင် ပြောဟောနေလိုက်တာဗျာ နားထောင်သာကြည့်တော့ ရယ်လဲရယ်နေရတယ်…ဆက်လက်ကြိုးစားဟောပြောနိုင်ပြီး ပြည်သူချစ် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ…။ မေတ္တာဖြင့် #လူတင် Video Credit Unicode Version မိမိကိုယျတိုငျက သာသနာ့ဘောငျထဲဝငျခငျြပမေယျ့ ဘဝပေးအခွနေအေရ မျောတျောပီကယျလုပျခိုငျးသောအခါ ဆိုငျကယျစီးလြှငျ ဆိုငျကယျဦးထုပျဆောငျးရနျ နှိုးဆျောသတိပေးနသေော ယာဉျထိနျးရဲ မျောတျောပီကယျ ဦးလေးကွီးရုပျသံ အှနျလိုငျးပျေါ နာမညျကွီးနပေါတယျ… အားလုံးကလဲ သဘောကစြရာဖွဈနပေါတယျ အပွောကလဲကောငျး တရားဟောစားလို့တောငျရပါတယျ ကွားရသူတှေ စိတျထဲမှာလဲ သတိထားဆငျခွငျစိတျဖွဈအောငျ … Read more
သငျ့လကျကောကျဝတျပျေါမှာ ဘယျနှဈကွောငျးပါလဲ ပွီးရငျ ဘာတှဖွေဈတတျသလဲ?
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ… လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေ လိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာ ပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး….. ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော် တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတစ်ယောက် မှာ လက်ကောက်ဝတ် မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွေကတော့ လမ်းကြောင်း ၁ အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းထင်ရှားပြီး တစ်ဆက်တည်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။လမ်းကြောင်းက တကယ်လို့ မှိန်းဖျော့နေမယ်၊ အပြတ်တွေများနေမယ် ဆိုရင်တော့ … Read more
ရှဆေံတျောဘုရားပျေါမှ ဘိလပျပွနျခေါငျးလောငျးလေးနှငျ့ ကြိနျစာသငျ့ခဲ့သောအဖွဈ…
ရွှေဆံတော် ဘုရားပေါ်သို့ ဓာတ်လှေကားမှ တက်လျှင် တက်တက်ချင်း မှာပင်ရွှေရောင် ခေါင်းလောင်းလေး တစ်လုံးကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းလောင်းပေါ်၌ ရေးထားသော “ဘိလပ်ပြန်ခေါင်းလောင်း” ဟူသော စာကြောင့်ပိုစိတ်ဝင်စား ဖို့ကောင်းသည်။ ထိုသို့ရေးထားသော ထိုခေါင်းလောင်းလေး၏ မူလအကြောင်းအရင်းကို သိရှိသူနည်းပါးသည်။ ထိုခေါင်းလောင်းလေး၏ အကြောင်းအရင်းခံကား ဤသို့ဖြစ်သည်။ ၁၈၅၂-၅၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပုဂံမင်းနန်းချ၍ မင်းတုန်းမင်းက ထီးနန်းသိမ်းပိုက်သည့်အချိန်တွင် စစ်ကိုပြေငြိမ်းခဲ့ကြသည်။ စစ်ပြေငြိမ်းသော်လည်း အင်္ဂလိပ်တို့မှာ စစ်နိုင်သူဖြစ်သည့်အလျှောက် မြန်မာနေရာဒေသ အသီးသီးမှ အဖိုးတန် ရတနာ ၊ ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများကို ထုံးစံအတိုင်း ယူငင်ကြလေသည်။ပြည်မြို့မှ အင်္ဂလိပ်စစ်သားများက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂေါ်ဒဝင် အား ခေါင်းလောင်းလေး တစ်လုံးကို ဆက်သကြသည်။ ထိုခေါင်းလောင်းလေးမှာ ပြည်မြို့ရွှေဆံတော် ဘုရားပေါ်မှ ယူငင်သွားသော ခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်းလေး၏ ဘေးပတ်လည်တွင် … Read more